Hampiakatra fitsarana ambony ny mpisolovava: voaheloka higadra efa-taona mahery, sazy mihatra i Berija | NewsMada
Par Taratra sur 01/10/2020
Nilatsaka ny didy… Tsy afa-bela i Berija. Nivoaka, omaly, tetsy amin’ny fitsarana Anosy ny didy momba ny “Raharaha Ravelomanantsoa Berija”. Migadra 44 volana, sazy mihatra ny tenany. Tsy hipetra-potsiny ny mpisolovava sy ny reniny.
Anisan’ny vesatra niampangana ity mpitarika ny fikambanana Solema ity ny “fanaratsiana sy faniratsirana ny mpitondra fanjakana tany anaty tambajotran-tserasera sy fanohintohinana ny fiandrianam-pirenena”. Naiditra am-ponja vonjimaika teny Antanimora i Berija, nanomboka ny fiandohan’ny volana jona teo. Izany hoe, efa efa-bolana izany, nialoha izao niakaran’ny raharaha teny anivon’ny fitsarana izany. 44 volana, efa-taona latsaka efa-bolana ny saziny tamin’ny didim-pitsarana, nivoaka, omaly. Midika izany fa manefa efa-taona sazy mihatra an-tranomaizina izany izy, manomboka izao.
Fanampenam-bava ireo tsy mitovy hevitra…
Afaka madiodio ny namany telo ary afaka noho ny fisalasalana ny iray hafa.
Manoloana izany, latsa-dranomaso teo Anosy, manoloana izany didim-pitsarana izany ny reniny, raha nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety. “Managataka ny filoham-pirenena hijery akaiky izao raharaha izao satria tsy namono olona ny zanako. Tsy rariny fa tena fanamparam-pahefana ka tena malahelo izaho reniny… Nanao soa ny mpitondra amin’izao fotoana izao izy ary nanao sorona ny ainy tamin’ny taona 2015… Zonay ny hampiakatra fitsarana ambony satria tsy mitombina ny fiampangana. Misy fankahalana sy loninoly…”, hoy izy.
Etsy an-daniny, nanamafy izany ny mpisolovava, R. Tahiana ny amin’ny hampiakarana ny raharaha amin’ny fitsarana ambony. “Didy fanampenam-bava ireo tsy mitovy hevitra amin’ny tena iny. Tsy nahafa-po anay ny didy satria fanehoan-kevitra ny anton’ny fanagadrana. Tsy zakan’ny fitondrana izany. Tsy mitombina ny fanakorontanana na fanaratsiana fanjakana…”, hoy izy.
Efa notanana teny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy
Tsiahivina fa efa niditra am-ponja vonjimaika teny Tsiafahy i Berija, ny fiandohan’ny taona 2015, tamin’ny fitondrana teo aloha. Anisan’ny niampangana azy ny “fanohintohinana ny filaminam-panjakana anatiny sy ny fikambanan’olon-dratsy”. Nahazo sazy mihantona roa taona izy tamin’izany ary nandoa lamandy 500 000 Ar. momba ny fahatrarana rongony tao an-tranony.